Imigaqo yokusetyenziswa - Carros.com
Le migaqo yenkonzo iinguqulelo ezikufutshane, imigaqo yethu yesevisi isebenza kwinguqulo yesiNgesi yesayithi. Bona inguqulo yesiNgesi
1. Imigaqo yokusetyenziswa
Ngokufikelela kwiwebsite kwi-https: //carros.com, uyavuma ukuba ubophelelwe le migaqo yenkonzo, yonke imigaqo nemimiselo efanelekileyo, kwaye uyavuma ukuba unembopheleleko yokuthotyelwa kwemithetho yasekhaya. Ukuba awuvumelani naliphi na le migaqo, awuvumelekanga ukusebenzisa okanye ukufikelela kule sayithi. Izinto eziqulethwe kule website zikhuselwe ngumthetho we-copyright kunye neempawu zentengiso.
2. Sebenzisa iLenisi
Imvume inikezelwa ukukhuphela okwesikhashana ikopi yezixhobo (ulwazi okanye isofthiwe) kwiwebsite yeCarros.com kwi-personal, non-commercial commercial viewing only. Oku kukunikezelwa kwelayisenisi, kungekhona ukudluliselwa kwesihloko, kwaye phantsi kwelayisenisi awukwazi:
ukuguqula okanye ukukopisha izinto;
sebenzisa izixhobo kuyo nayiphi na injongo yoshishino, okanye nawuphi na umboniso karhulumente (ukuthengiswa okanye ukungabikho kwezoshishino);
zama ukuhlaziya okanye ukubuyisela injini nayiphi na isofthiwe esiluncedo kwiwebhusayithi yeCarros.com;
ukususa nawuphi na ilungelo lobunikazi okanye olunye ukwaziso olusuka kwizinto eziphathekayo; o
ukudlulisela izinto kumnye umntu okanye ukubonisa izinto kwiyiphi na enye iseva.
Eli layisensi liya kuphelisa ngokuzenzekelayo ukuba liphula nayiphi na yale miqobo kwaye inokukhanselwa yiCarros.com nanini na. Xa ugqibile ukujonga kwakho kwezi zinto okanye xa ugqityiwe le layisenisi, kufuneka uchithe nayiphi na into ekhutshweyo kwifa lakho, ngefowuni okanye ifomathi.
Izixhobo kwiwebhusayithi yeCarros.com zinikezwa "njengoko kunjalo". I-Carros.com ayenzi mvume, ivakalise okanye iyicacise, kwaye ngoku ke iphika kwaye iphika zonke ezinye iziqinisekiso, kubandakanywa, ngaphandle kwemida, iimqinisekiso okanye imibandela yokuthengiswa, ukufaneleka komsebenzi othile okanye ukungaphulani kwipropati. ingqondo okanye ukuphulwa kwamalungelo. Ukongeza, iCarros.com ayivumeli okanye yenza nayiphi na imbeko malunga nokuchaneka, mhlawumbi iziphumo okanye ukuthembeka kokusetyenziswa kwezixhobo kwiwebhusayithi yayo okanye ngokubhekiselele kwizinto ezinjalo okanye nasiphi na isayithi esixhomekeke kule sayithi.
Ngaphandle kweemeko iCarros.com okanye abaxhasi bayo baya kuba noxanduva lokulimala (kubandakanye, phakathi kwabanye, ukulimala ngokulahlekelwa kwedatha okanye inzuzo, okanye ngenxa yokuphazanyiswa kwezoshishino) ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izinto kwiiKota. .com kwiwebhusayithi, nangona iCarros.com okanye ummeli ogunyazisiweyo weCarros.com uye waziswa ngokubhaliweyo okanye ngokubhaliweyo malunga nomonakalo onjalo. Ngenxa yokuba ezinye iimbambano azivumeli ukulinganiselwa kwimigunya yemirhumo okanye ukulinganiselwa kwemithwalo yemonakalo engaqondakaliyo okanye engafanelekanga, le miqathango ingasetyenziswa kuwe.
5. Ukuchaneka kwezixhobo
Izinto ezibonakala kwiwebhusayithi yeCarros.com zingaquka iimpazamo zobugcisa, typographical okanye zeefoto. I-Carros.com ayiqinisekisi ukuba nayiphina impahla kwiwebhusayithi yayo ichanekile, iphelele okanye ikhoyo. I-Carros.com ingenza utshintsho kwizinto eziqulethwe kwiwebsite yayo nanini na ngaphandle kwesaziso esandulele. Nangona kunjalo, iCarros.com ayiyi kuhlaziya izixhobo.
I-Carros.com ayizange ihlaziye zonke iisayithi ezixhomekeke kwiwebhusayithi yayo kwaye azixanduva lwezinto ezixhumene nazo. Ukufakwa kwanoma yiyiphi inxibelelwano ayifuni ukuvuma ukuba yiCarros.com yesiza. Ukusetyenziswa kwanoma iyiphi i-website edibeneyo kukungozi yomsebenzisi.
I-Carros.com ingahlaziya le migaqo yenkonzo kwiwebhusayithi yakho nanini na ngaphandle kwesaziso sangaphambili. Ngokusebenzisa le website, uyavuma ukugcina inguqulo yangoku yale migaqo yenkonzo.
8. Imithetho kaRhulumente
Le miqathango neemeko zilawulwa kwaye zenziwe ngokuhambelana nemithetho yaseConnecticut kwaye ungenise ngokungenakuqondiswa kummandla othe wodwa weenkundla zeso sizwe okanye indawo.
Eli gama lisebenza ngokufanelekileyo ngoMatshi 27, 2019.